घर जग्गा को लागी सामग्री बजार | Martech Zone
जब हामी निर्माण गर्दछौं एजेन्ट सॉस साइटहरू, आईडीएक्स एकीकरण, टुरहरू, मोबाइल टुरहरू, भिडियो टुरहरू, ईमेल मार्केटि,, एसएमएस सन्देश र प्रिन्टको संयोजन, हामीलाई थाहा थियो कि सामग्री मार्केटिंग एजेन्टहरूलाई बढी बिक्री ड्राइभ गर्नको लागि महत्वपूर्ण थियो। र, कुनै आश्चर्यको कुरा होइन, हाम्रा एजेन्टहरू जसले प्लेटफर्मको पूरा लाभ उठाउँछन सबैभन्दा उत्तम प्रतिक्रिया र करीव दरहरू देख्छन्।
सामग्री मार्केटिंग केवल एक बज शब्द वा केही अप्रमाणित, प्रयोगात्मक मार्केटिंग रणनीति हैन: यो वास्तवमा काम गर्दछ। वास्तवमा, सामग्री मार्केटिंग भुक्तान खोजको रूपमा प्रति डलर धेरै लीड रूपमा लगभग तीन गुना उत्पादन देखाइएको छ। एक घर जग्गा पेशेवरको रूपमा, यद्यपि, सामग्री सिर्जना जुन तपाईंको दर्शकहरूसँग प्रतिध्वनि गर्दछ चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। सबै भन्दा पछि, घर जग्गा उपभोक्ताहरू एक विविध समूह हो, विभिन्न उमेरका फराकिलो।
प्लेसेस्टर यो इन्फोग्राफिकले विकसित गरेको छ कि रियल एस्टेट उद्योगमा कन्ट्याक्ट सामग्री मार्केटिंगले कत्ति ठूलो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा गर्दछ। प्लेसेस्टरले सुन्दर डिजाइन, होस्टिंग, र IDX / MLS एकीकरण संयोजन संयोजन उत्तरदायी रियल एस्टेट वेबसाइटहरू बनाउँछ।
टैग: आईडीएक्स एकीकरणइंफोग्राफ़कप्लेसटरअचल सम्पत्तिघर जग्गा सामग्री मार्केटिंगघर जग्गा मार्केटिंगघर जग्गा साइटहरू
अक्टोबर 15, 2013 बिहान 4:57 बजे
राम्रो पोष्ट! वास्तवमै जानकारीमूलक .. म सँग साँच्चै राम्रो पढिएको थियो! बाडेको मा धन्यवाद!